Ngwongwo bara uru nke ihe osisi bụ ezigbo onye mmekọ a pụrụ ịdabere na ya na akụ na-emegharị ihe, osisi sitere na okike dị nro, na-adịghị akpali akpali ma dị mma maka ahụ mmadụ. Agbanyeghị, okirikiri osisi dị ogologo ma ọnụ ahịa akụ na ụba ya dịtụ elu.
Ya mere, anyị mepụtara ngwa nke ihe achara. Bamboo bụ osisi na -eto ngwa ngwa nke a na -eji dị ka ihe ọzọ maka akụrụngwa na osisi ọgbara ọhụrụ.
Ahịhịa bamboo na -adị nro nke ukwuu n'ime afọ ole na ole mbụ, na -esi ike n'ime afọ ole na ole wee na -ata ahụhụ. N'ikpeazụ, a na -emegharị ha mgbe owuwe ihe ubi gasịrị. Ha na -ewe iwe ka oge na -aga, na -enye ezigbo ihe maka iwu ihe ụmụaka ji egwuri egwu. Achara bụ akụrụngwa na -adigide. Ọ na -etolite n'ọtụtụ mpaghara ihu igwe.
N'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ China, enwere akụ achara bara ụba na Beilun, Ningbo. HAPE nwere nnukwu ọhịa achara n'ime obodo Beilun dị na Beilun, nke na -ahụ na enwere akụrụngwa zuru oke maka nyocha, mmepe na imepụta ihe ụmụaka ji egwurugwu.
Bamboo nwere ike tolite ruo mita 30 n'ịdị elu, nwere oke etiti etiti ya bụ 30 cm na mgbidi dị elu dị elu. Dị ka otu n'ime osisi na -eto ngwa ngwa, ọ nwere ike itolite 1 mita kwa ụbọchị n'okpuru ọnọdụ kacha mma! A ga-etinyerịrị ọnya ndị na-eto eto ihe dị ka afọ 2-4 tupu enwee ihe ubi na hazie ha.
Achara bụ otu n'ime ihe nde kwuru nde mmadụ gburugburu ụwa. Ahịhịa bamboo na -eri, dị mma nke ukwuu ma na -edozi ahụ. Osisi enwetara site na Bamboo Culms siri ezigbo ike. Ruo ọtụtụ puku afọ, ihe niile dị n'Eshia bụ nke achara, n'ihi na ọ bụ ebe niile, enwere ike iji ya maka ọtụtụ ebumnuche dị iche iche. Ọtụtụ ọrụ na -adabere na nhazi na omenala ụlọ ọrụ a. A na -egbutekarị ahịhịa achara n'ọhịa achara na -enweghị mmebi osisi.